Google Pixel3နှင့် Pixel3XL ၏ပြproblemsနာအသစ်များ Androidsis
Google Pixel3XL နှင့်ပိုသောပြproblemsနာများ: multitasking လုပ်ခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများ
El ဂူဂဲလ်ဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအသစ် G. View ၏အခြေပြုကုမ္ပဏီကြီးသည်အတိတ်ကအမှားများကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေသည်။ ယခင်မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းများကဲ့သို့သုံးစွဲသူများသည်သတင်းပို့သူများပြားလာသည်။ Google Pixel3နှင့် Pixel3XL ပြproblemsနာများ.
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာမင်းတို့ရဲ့ပြproblemsနာတွေအကြောင်းမင်းတို့ကိုပြောခဲ့ဖူးတယ် Google Pixel3XL မျက်နှာပြင်နှင့်စပီကာများဒီဟာကစတာပဲလို့ငါတို့ကြောက်တယ်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများစွာသည် Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့၏ပြaနာများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။ RAM memory4GB ရှိသော်လည်းဖုန်းသည် တစ်ချိန်တည်းတွင်နောက်ခံအက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုကိုသိမ်းဆည်း။ မရပါ.
ဟုတ်တယ်၊ high-end ဖုန်းကဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေရှိနေပေမယ့် application သုံးခုဖွင့်လို့မရဘူး။ အားလုံးသုံးစွဲသူများသည်ဤအနေဖြင့်ခံရပေမယ့် Google Pixel3နှင့် Pixel3XL ပြproblemsနာများကျနော်တို့အတူတူပင်ဆက်လက်; ဤအခြေအနေများအောက်တွင်စျေးကွက်၌ terminal ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊ အထူးသဖြင့်ဟဲဗီးဝိတ်များဖြစ်သော Samsung နှင့် Huawei များကဏ္sectorတွင်သင်ကိုယ်တိုင်နေရာတစ်ခုဖန်တီးလိုပါက
Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့၏ပြtheနာများအားပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်း ၏စီမံခန့်ခွဲမှု multitasking, သူတို့ရဲ့ဖုန်းက applications တွေကိုတိုက်ရိုက်ပိတ်ကြောင်းညွှန်ပြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ အချို့ကမူသူတို့နှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါနောက်ခံအပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ထားကြသည် Google Pixel3နှင့် Pixel3XL ကင်မရာ.
Big P သည် Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့၏ပြproblemsနာများကိုအဖြေရှာနေပြီးဖြစ်သည်
အစပိုင်းတွင်သတင်းစာများက Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့ကိုကြီးမားသော G ၏ဆိပ်ကမ်းမျိုးဆက်သစ်တွင် ၆ မှ ၈ GB အထိရှိသင့်သည်ဟူသောအချက်ကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သိသာတဲ့ဒီပြthisနာရဲ့အရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။6GB RAM နဲ့အတူဒီကိရိယာဟာ silk လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Android 8 Pie, Google ရဲ့ operating system ဗားရှင်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ပါ။ ဤနေရာတွင်အားလုံးပြallနာများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်။
Android9Pie လို့ခေါ်တဲ့ function တစ်ခုရှိတယ် အလိုက်ဘက်ထရီ ထို့အပြင်အတုထောက်လှမ်းရေးအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မည်သည့် application များကိုကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးပြုသည်၊ မည်သည့်နည်းကိုအသုံးပြုခဲသည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားသဖြင့်ဖြေရှင်းချက်များထဲမှတစ်ခုသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုဖုန်းများပေါ်တွင်ပိတ်ထားနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်အခါဂူဂဲလ် Pixel3နှင့် Pixel3XL သည်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုပိတ်သည့်အခါတွင်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်သည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုစတင်ရန် Google အပိုနာရီအနည်းငယ်လုပ်ရတော့မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကြောက်ကြသည်။ အားလုံးတတ်နိုင်သမျှ software update တစ်ခုဖြစ်နိုင်သမျှ Google Pixel3နှင့် Pixel3XL ပြproblemsနာများ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google Pixel3XL နှင့်ပိုသောပြproblemsနာများ: multitasking လုပ်ခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများ
Google Maps မှပိုမိုရယူရန်လှည့်ကွက်
တူးဖော်ခြင်း၌တွင်းတူးအော်ပရေတာတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်